सिस्नेमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर - sailungonline
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १५:५० । रुकुमपूर्व
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका– २ मा दुई दिनदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएको छ । बिहीबारदेखि सुरुआत भएको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि त्यहाँका दर्जन बढी बस्ती जोखिममा परेका छन् ।
सिस्ने–२ को प्वाङस्थित कुरिपानीबाट सुरु भएको डढेलो आज बिहानसम्म धेरै ठाउँमा फैलिसकेको छ । कुरिपानी सामुदायिक वनबाट सल्किएको आगो कसरी सल्कियो भन्ने पत्ता भने लाग्न सकेको छैन । सिस्ने– २ का वडाध्यक्ष जीवन केसीले विद्यालयबाट फर्कँदै गरेका बालबालिकाले आगो लगाएको बताए ।
उक्त डढेलोबाट तीन वटा घर दर्जन बढी गोठ जलेर नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार डढेलोले दतकुना, कुचिबाङ, गोल्खाडा, सुद्रीलगायतका बस्तीमा आगो फैलिएको छ । डढेलो नियन्त्रणमा इलाका प्रहरी कार्यालय प्वाङ र स्थानीय लागि परेका छन् । आगो धेरैतिर फैलिएकाले नियन्त्रणको सम्भावना न्यून छ ।
डढेलोबाट केही घर गोठ जलेर नष्ट भएको खबर प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले बताए । डढेलो नियन्त्रणमा नआएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बसेको छ । बैठकले डढेलो नियन्त्रणमा नआएसम्म आआफ्नो सूचनालाई अद्यावधिक गर्ने र क्युआरटी, आइआरटी टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ राईले बताएको छ । अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने भएको छैन । डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि नागरिक भने त्रसित छन् ।
गोरखा भूकम्पको छ वर्ष : छ लाख ३८ हजार ५४० घर पुनःनिर्माण
बियोन्डोले फुल बुट्टे गाउँदा मन्त्री दंग
स्वयम्भू स्तूप परिसरका घर बुद्धाचार्य परिवारलाई हस्तान्तरण हुँदै
‘अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ ’
काभ्रे कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य दोब्बर
कोरोना सङ्क्रमणका कारण चितवनमा महिलाको मृत्यु
१. भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको धरहरा ठडियो (फोटो फिचर)
२. गोरखा भूकम्पको छ वर्ष : छ लाख ३८ हजार ५४० घर पुनःनिर्माण
३. पुनःनिर्माणपछिको धरहरा
४. बियोन्डोले फुल बुट्टे गाउँदा मन्त्री दंग
५. स्वयम्भू स्तूप परिसरका घर बुद्धाचार्य परिवारलाई हस्तान्तरण हुँदै
६. ‘अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ ’